Izindatshana zikaGrace Carter ku Martech Zone |
Imibhalo nge UGrace Carter
UGrace Carter ungumbhali wezobuchwepheshe kwa I-Academized futhi Usizo lwase-Australia izinsizakalo. Usebenza ekuthuthukiseni ukuguqulwa futhi athuthukise amaqhinga wokumaketha. Futhi, uGrace unguthisha e- Usizo Lokwabiwa Kwezengqondo iwebhusayithi yezemfundo.
NgoLwesine, July 19, 2018 NgoLwesithathu, July 18, 2018 UGrace Carter
Ngokwakha okuqukethwe abantu abakuthola kuthakazelisa futhi kufanelekile, ungakhulisa ukubonakala kwesayithi lakho emiphumeleni yosesho lweGoogle. Ukwenza lokho kuzokusiza ukukusethela ukuguqulwa okuthile. Kepha ukwenza abantu babheke izinto zakho akuqinisekisi ukuthi bathatha isinyathelo futhi bakunikeze ukuguqulwa. Landela lezi zeluleko eziyisikhombisa ze-ecommerce zokwenza okuqukethwe okuguqukayo. Yazi iKlayenti Lakho Ukwenza okuqukethwe okuguqukayo kuzodingeka ube nomqondo omuhle wokuthi yini i-